China Hot Kutengesa hupenyu saizi yakanaka yendarira Mermaid mifananidzo Tsime rine Holding Shell fekitori uye vagadziri | Atisan Anoshanda
Outdoor kushongedzwa ndarira mermaid mvura tsime scu ...
Kupisa Kutengesa hupenyu saizi yakanaka yendarira Mermaid mifananidzo Tsime rine Holding Shell
Chinyorwa: Antique Bronze
TAG: Tsime reMhangura Mermaid Tsime
Pamhepo technical Rutsigiro, Onsite Kuisirwa
3D modhi dhizaini, yakazara mhinduro yemapurojekiti
yendarira Mermaid Tsime
Ndarira, ndarira, ndarira
Aivigirwa Standard Wooden Case
Yakakwenenzverwa + Honed
Kupisa Kutengesa hupenyu saizi yakanaka yendarira Mermaid Tsime ine Kubata Shell
Bronze Mermaid Mufananidzo Wakajeka
Iyo yepamusoro-soro bronze mermaid kuvezwa yakagadzirirwa pamunda wedu wevatengi veAmerica. Anoronga kuisa ichi chivezwa mubindu rekuseri uye chinogona kusunganidzwa kune sosi yemvura sekasipiti kadiki. Iwo maviri mermaid akakomberedzwa neumwe neumwe nenzira yakajeka uye inofadza nzira.
Makomborero eBronze Sculpture
Zvakavezwa zvidhori zvendarira zvinoshandisa yakakwirira tembiricha inodzivirira kuumbwa senge Refractory plaster molds kana jecha kuumbwa, ayo anowanzo kuve emukati nekunze matanda. Mvura yemhangura inodururwa muforoma kubva mudenga uye yakatonhorera kuita.
Nekuda kwehunhu hwechiumbwa chebronze, ine hunhu hunogara kwenguva refu. Icho chivezwa chendarira pachezvayo chine huremu hunorema, sezvo zvinhu zvakavezwa zvemufananidzo zvaigona kuratidza zvirinani hunhu hwemunhu. Zvakare, zvivezwa zvendarira zviri nyore kuchengetedza uye hazvizoregi kushanda nenguva.
Kushandiswa kweBronze Sculpture
Nekuvandudzwa kwehunhu hwehupenyu, kudiwa kwedu kwezvivezwa zvebronze kuri kukura, uye nguva yeupenyu yezvinhu zvakavezwa zvebronze zvinoenzaniswa. Yakareba uye yakapfava kuronga, kazhinji inogona kutora chinzvimbo chakakosha mune kumwe kuronga kwehunyanzvi. Kunyangwe iri pakati peguta kana gadheni rekumashure, iyo bronze mermaid chivezwa chisarudzo chakanaka.
Sekuveza fekitori ine makore mazhinji echiitiko, isu tine basa rakanakisa uye nyanzvi dzezvivezwa. Zvese zvigadzirwa mune yedu gallery zvinogona kuve zvakagadziriswa, zvisinei saizi yako kana mavara anodikanwa, tinogona kusangana navo.
Tsananguro: Kupisa Kutengesa hupenyu saizi yakanaka yendarira Mermaid Tsime ine Kubata Shell
Raw Zvinyorwa: Ndarira / Mhangura / Ndarira
Saizi Range: Yakajairwa Kureba 1.3M kusvika 1.8M kana Yakagadziriswa
Pamusoro Ruvara: Yekutanga ruvara / shinny goridhe / girini / nhema
Processing: Kanda neSurface Polishing
Mukurumari: inoshanda netembiricha kubva -20 ℃ kusvika 40 ℃. Kure kure nechimvuramabwe, zuva rinowanzo kunaya, inorema nzvimbo yechando.
Basa: Yeimba yemhuri / yemukati / yemamongi / fane / yepasi scape / theme nzvimbo uye nezvimwe
Mubhadharo: Shandisa Trade Assurance Kuti Uwane Favor Yakawedzerwa! Kana naL / C, T / T.
Pashure: yazvino gadheni tv inomira neFrance marble mabwe chimoto chakakomberedza mantels
Zvadaro: Kupisa kutengesa kushongedza ibwe gadheni zvigadzirwa mvura yemarble kerubhi tsime
ndarira yakanaka mukadzi chivezwa kunze kwebindu ...
Outdoor kushongedzwa bindu machena Mini mvura fou ...
Garden kushongedzwa chena machena zvivezwa rusvingo f ...
Chinese ruoko rakavezwa decoration ibwe mvura foun ...
Marble ibwe hombe yekunze mvura yekushambira ...
Chinese echisikigo dombo rekunze musikana mukomana fung shu ...